Samitivej အလှအပဗေဒသိပ္ပံ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
၆၆ (၀) ၂၇၁၁- ၈၅၁၉၊ (၀)၂၇၁၁-၈၅၁၄ ၊၀ ၂၇၁၂
အရေပြားဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရေးအပါဆုံးတွေထဲက တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပနဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ ရုပ်ရည်ဆိုတာကို နူးညံ့ပျော့ပြောင်းလို့ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး အားအင်ပြည့်၀နေတဲ့ အရေပြားလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ညစ်ညမ်းမှုလိုမျိုး ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေက ထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်တဲ့ ဒီအပေါ်ယံအရေပြားကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဟောဒီက Samitivej အလှအပဗေဒသိပ္ပံမှာတော့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဝင်းလက်တောက်ပမှုနဲ့ ရွန်းစိုမှုတို့ကို အိုမင်းလာတဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရေပြားဆရာဝန်ကြီးတွေဟာ အရေးအကြောင်းတွေ ချောမွတ်သွားပြီး လူကြီးမင်းရဲ့မျက်နှာကို နှစ်ပေါင်းများစွာ နုပျိုသွားစေမယ့် နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေနဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အထူးတတ်ကျွမ်းထားပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် အမြဲကိုရေပန်းစားနေတဲ့ Botox ကနေ ဘယ်လိုခွဲစိတ်တာ၊ ဆေးထိုးတာမှ မလုပ်ရဘဲ မျက်နှာကြွက်သားတွေကို အားပျော့ပျော့လျှပ်စစ်စီးကြောင်းနဲ့ လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဆေးထိုးရ၊ ခွဲစိတ်ရတာ အနည်းဆုံး အရေပြားပင့်တင်မှုတွေအထိ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုပါတယ်။
အမြင်ဆိုးလှတဲ့ သွေးကြောထုံးတွေ၊ မှဲ့တွေ၊ ကြွက်နို့တွေ၊ အသားပိုတွေ၊ အသားအရောင်ကွက်တာ၊ အသားအရောင် မညီတာ ဒါမှမဟုတ် ဆယ်ကျော်သက် ဝက်ခြံတွေအတွက် ပြုပြင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ထပ်ဖန်တလဲလဲဖြစ်နေတဲ့ နှင်းခူနာကြောင့် ဆန်ခါပေါက်ဖြစ်ပြီး ခြောက်သွေ့ယားယံနေတဲ့ အရေပြားကို ကျွန်တော်တို့ ဂရုစိုက်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အရေပြားအမျိုးအစားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ညင်သာသိမ်မွေ့တဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကို သေချာပေါက်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖုံးအုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာ ဆေးမင်ကြောင်တွေကိုတောင် ကျွန်တော်တို့ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်သမျှတိုင်းကို JCI က တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့် အဆင့်မြင့်စောင့်ရှောက်မှုကို တပြေးညီဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း အလှတိုးစေတဲ့ အဲ့ဒီခွဲစိတ်ကုသမှုတွေအတွက် Samitivej ဆေးရုံကြီးရဲ့ အရေပြားအစားထိုးခြင်းဆိုင်ရာနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုဆေးခန်း မှာ ရွေးချယ်စရာများစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အထွေထွေ အရေပြားရောဂါပညာ (dermatology)
အမွှေးအမျှင်၊ ဆံပင်နှင့် လက်သည်းရောဂါများအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်း
အရေပြားကင်ဆာအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်း
ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်သည့် အရေပြားရောင်ရမ်းသည့်ရောဂါ (allergic dermatitis) အတွက် အရေပြားစစ်ဆေးခြင်း
အရေပြားကို လေဆာဖြင့် အားသစ်လောင်းခြင်း
အရေးအကြောင်းများနှင့် ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို ဖယ်ရှားရန် အရေပြား ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
အရုပ်ဆိုးသော သွေးကြောများနှင့် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောများအား ကုသခြင်း
မလိုလားအပ်သော အမွှေးအမျှင်များ ဖယ်ရှားခြင်း
မှဲ့များ၊ ပြည်တည်အိတ်များ ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် အရေးပြားဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောများအတွက် သွေးကြောထုံးခြင်းကို ဆေးထိုးကုသည့်ကုထုံး
ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပုံပန်းသဏ္ဍန်၊ အရေပြားအလွှာရောင်ခြင်း (cellulitis) နှင့် အရေပြားချောမွေ့မှု ပြဿနာများ
အသက်အရွယ်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အစက်အပျောက်များ၊ နေလောင်ကွက်များ၊ ပုံမှန်အသားအရောင်မဟုတ်သော အရေပြားအကွက်အနာများ ဖယ်ရှားခြင်း
အဆီစုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အရေပြားမညီညာခြင်းကို စက်ဖြင့်နှိပ်နယ်ကုသခြင်း
အဆီပိုများကို ပဲပိစပ်မှထုတ်ယူထားသည့် အနှစ်ဖြင့် လျော့ချသည့် အဆီပျော်ကုထုံး
အဆီအကျမြန်ပြီး အရေပြားပိုမို တင်းရင်းစေသည့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကုထုံး
အဆီအသုံးချမှုတိုးသည့်အပြင် အရေပြားကို ပြန်လည်ခိုင်မာစေသော ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း
လေဆာဖြင့်ကောလာဂျင်ပရိုတိန်းပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးခြင်း – အသားအရောင် ညီလာခြင်း၊ အရေးအကြောင်းနှင့် အမာရွတ်လျော့ကျခြင်း ရလာဒ်များရစေသည့် ကောလာဂျင်ပရိုတိန်းအသစ်များ ထုတ်လုပ်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် နာကျင်မှု၊ ယားယံမှုမရှိသည့်နည်းပညာ
IPL လေဆာ – အနီကွက်များနှင့် အသားအရောင်မညီခြင်းများ လျော့ကျစေသည်
EGF လေဆာ – အဆီဖုများ အတွက် ရိုးရှင်းလျှင်မြန်သော ကုသမှု
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်လေဆာ – အသားပိုများ၊ မှဲ့များနှင့် ကြွက်နို့များအတွက် ကုသမှု
ရောင်ခြယ်ဆဲလ်လေဆာ – ဆေးမင်ကြောင်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် အမာရွတ်မကျန်သောကုထုံး
အမွှေးအမျှင်ဖယ်ရှားသော ဣန္ဒနီလာ လေဆာ– အပြီးတိုင်အမွေးအမျှင်ဖယ်ရှားရေးအတွက် ထိရောက်မှုရှိသောနည်းလမ်း
သွေးကြောလေဆာ – သွေးပြန်ကြောထုံးများနှင့် အခြားသွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက်
လေဆာအေး (စွမ်းအင်နည်းလေဆာ) – ဝက်ခြံ၊ မှဲ့ပြောက်များ၊ အမှတ်အသားများ၊ အမာရွတ်များနှင့် အရေပြားပြဿနာဖြစ်စေသော ဓါတ်မတည့်မှုတို့အတွက်
အလွှာအသစ် – တွယ်ဆက်တစ်ရှူးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ဆဲလ်အသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အရေပြားတင်းစေခြင်းအပြင် ဝက်ခြံ၊ အရေးအကြောင်းနှင့် အမာရွတ်များလျှော့နည်းစေရန်အတွက် စိန်လွှာနည်းပညာ
အောက်ဆီအသက် – အောက်ဆီဂျင် ဖြန်းပေးခြင်အားဖြင့် အရေပြားကို ပြန်လည်အားသစ်လောင်းပေးသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာ
အဏုစိတ်အပေါ်ယံအရေပြားလွှာကိရိယာ – အထူး အရေပြားခွာခြင်းစနစ်
တွယ်ဆက်တစ်ရှုးအမှတ်အသားနှင့် မျက်လုံးအမှတ် – အရေပြားကို အားသစ်လောင်းပြီး စိုစွတ်စေသည်၊ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ဧရိယာ ညိုမည်းနေခြင်းနှင့် ရောင်ရမ်းနေခြင်းများ လျော့ကျစေသည်။
အသံလှိုင်းဖြင့် အရေပြားအတွင်း ဆေးစိမ့်ဝင်စေခြင်း– စိုစွတ်စေရန်အပြင် အရေပြားကို အားပြည့်စေပြီး မျက်စိအောက်ရှိဧရိယာ ဖေါင်းနေခြင်းကို လျော့ကျစေရန်အတွက် ဒါးမစ်အလွှာသို့ ဗီတာမင်များနှင့် အရေပြား
အာဟာရများ ထုတ်ပေးရန် အထူးအသံလွန်လှိုင်း
လျှပ်စစ်အမှုန်ကိုအသုံးပြု၍ အရေပြားအတွင်း ဆေးစိမ့်ဝင်စေခြင်း– အာဟာရများနှင့် ဆေးဝါးများကို အရေပြားအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်စေပြီး ပိုမိုဝင်းပနုပျိုသော ရုပ်ရည်ကိုရရှိစေရန် အားပျော့သောလျှပ်စစ်အား
AHA – မျက်နှာ အပေါ်ယံလွှာမှ အိုမင်းရင့်ရော်သော အရေပြားဆဲလ်များကို ဖယ်ရှားရန်သုံးသော သဘာဝအသီးအဆီအနှစ်
၆၆ (၀) ၂၃၇၈-၉၀၀၀ လိုင်းခွဲ ၂၄၇၅၁-၂
Pongpat Metapipattanakul, M.D.
Kittiphon Jitardhan, M.D.
Borisorn Udomthanaporn, D.D.S.
Pimpika Tansupawatdikul, M.D.
Rachane Saksrivitaya, M.D.
Jaruwun Chugumnert, M.D.